Mica Powder, Mica Flake, Ruvara Chips - Lingshou
Mica flakes inotorwa kubva muboka retsamba silicate zvicherwa, inonzi mica, inosanganisira muscovite, phlogopite, biotite uye nevamwe. Kuburikidza nehunyanzvi hwekugadzira zvigadzirwa, iwo mica zvicherwa akapatsanurwa kuita zvidimbu-senge zvidimbu, akapatsanurwa muzvisikwa zvemavara mavara uye akaputswa pasi kuva akagadzika akaenzana flakes. Aya maratidziro akasarudzika anopa simbi yesimbi yakasikwa isingakwanise kuitika pamwe nemamwe mainjini anogadzirwa. Ivo ndivo vakanakidzana vanobata nekugadzirwa kwe lacquer nematombo pendi uye yakasimba stereo yekushongedza zvinhu zvekunze uye zvemukati zvipfeko.
Yakakura Mica Powder Yakatsanangurwa yekambani yedu: 20 mesh, 40 mesh, 60 mesh, 80 mesh, 100 mesh, 325 mesh, 400 mesh, 500 mesh, 600 mesh, 800 mesh, 1000 mesh, 1250 mesh uye 2500 mesh. Izvo zvinogona zvakare kuvezwa. Mica pfumbu rudzi rweasingaiti simbi, ane mhando dzakasiyana dzekusanganisa 49% SiO2 uye 30% Al2O3. Mica ine yakakura elasticity uye tnessness zvivakwa. Iyo ndiyo mhando weprimeral inowedzera yezvivakwa zvekuputira, kupisa kwakanyanya kupikisa, acid uye alkali kuramba, kupesana nekuora uye kuomerera pakasimba, nezvimwe. Inoshandiswa zvakanyanya mumidziyo yemagetsi, tsvimbo yekuzora, rabara, mapurasitiki, mapepa, mapurasitiki, peints, ceramics, cosmetics uye zvitsva zvekuvaka uye mamwe maindasitiri. Nekuvandudzwa kwehunyanzvi, zvimwezve zvitsva zvinoshandiswa zvichaongororwa.
Vermiculite imhando yemaminerari akaiswa ayo ane Mg uye anogadzirisa kechipiri kubva ku hydrate aluminium silices. Iyo inowanzogadzirwa neyemamiriro ekunze kana hydrothermal shanduko ye biotite kana phlogopite. Yakakamurwa nematanho, vermiculite inogona kukamurwa kuva isina kuzivikanwa vermiculite uye yakawedzerwa vermiculite. Yakakamurwa neruvara, inogona kukamurwa kuita goridhe nesirivheri (nyanga dzenzou). Vermiculite ine zvinhu zvakanakisa zvakadai sekupisa kupisa, kudzivirira kutonhora, kupesana nehutachiona, kudzivirira moto, kunyorwa kwemvura uye kunyorova, nezvimwewo pakabikwa kwemaminitsi 0.5 ~ 1,0 pasi pe800 ~ 1000 ℃, huwandu hwayo hunogona kukurumidza kukurumidza ne8 kusvika ku15. nguva, anosvika makumi matatu nguva, nemuvara wakashandurwa kuita goridhe kana sirivheri, kugadzira yakasarudzika-yakarongedzwa vermiculite isiri anti-acid uye isina kunaka mukushanda kwemagetsi.
Ruvara Flakes, zvakare inowanzonzi tsviyo, machipisi, svumbunuro kana zvimedu zveganda etc .. Icho chinhu chakatorwa kubva kusina tsvina zvicherwa zvicherwa. Nehunyanzvi hwekugadzira zvigadzirwa, inoumba mhando yakasarudzika yehexagonal yemapepa-senge chinhu chinoitwa mune zvigadzirwa zvakashongedzwa zvinoshandiswa mumapurasitiki uye zvinhu zverabha nenzira dzakawanda-nzira nhanho kurapwa uye kurapwa kwemakemikari. Aya maratidziro akasarudzika anopa simbi yesimbi uye inonakisa ruvara inofananidza inoratidzira iwo maitiro maitiro ezvakasikwa granite uye marble. Izvi zvekudzokera-kuzvisikwa zvekuona zvinoitika hazvigone kuitika nezvimwe zvinhu. Saka iwo mavara maruva anobatsira kuvandudza mhando yezvigadzirwa zvako kuti zvive zvinokwikwidza mumusika wako.
Composite color flake inozivikanwawo senge acrylic flake, epoxy flake, vinyl chip, ruvara chip. Ndiyo imwe yemhando yemafurutsi akaumbwa akaumbwa ne acrylic resin kuburikidza nehunyanzvi hunyanzvi. Iyo ine yakakosha chigadzirwa chiitiko, inoratidza yakasarudzika uye nekukurumidza kwekuvaka maitiro maitiro ayo haagone kutsiviwa nemamwe flakes.
Lingshou County Xinfa Mineral Co, Ltd, yakavambwa munaKurume, 2002, iri muLujiawa Industrial Park, Lingshou County, Hebei, China. Isu tiri nyanzvi yekugadzira yakanakisa-yakanaka mica poda, mavara edeakisi, akaumbwa emagetsi, vermiculite nezvimwe zvine gore rekugadzira rinokwanisa kupfuura matani zviuru gumi. Kambani yedu inofukidza nharaunda inosvika zviuru makumi matatu, uye nenzvimbo yekuvaka inotora kupfuura zviuru gumi nezvivakwa zvehofisi 1,200㎡. Muna 2003, kambani yedu yakapihwa se "Enterprise of Kuona Chibvumirano & Kuchengeta Vimbiso" naHebei Provincial Bureau of Industry neCommerce;
. mushure mekupinda mu ...
Zvishandiso: Izvo zvinotevera zvishandiso zvinofanirwa kuve zviripo isati yavakwa. Iwo akajairika uye iwe unogona kuvawana muzvivakwa zvekuvaka zvitoro kana ma Hardware zvitoro. Roller Brush Spray Gun ...